शारीरिक मिलन मात्र होइन प्रेम-Setoghar
प्रेम भनेको के हो ? माया भनेको के हो ? प्रेम र मायाको उत्तरको पछाडि दौडियौं भने शायद यसको जवाफ भेट्न सकिँदैन होला। विभिन्न युगमा विभिन्न प्रेमी र विद्वानले प्रेमको परिभाषा आ-आफ्नो तरिकाले गरेका छन्। जति प्रेमको परिभाषा बुझ्दै गयो, त्यति यो प्रेमको गहिराइले हामीलाई डुबाउँदै जान्छाैं। मानिसहरूले भनेझैं प्रेम नि:स्वार्थ छ भनौं भने प्रेममा स्वार्थ पनि भेटेको छु। प्रेममा छलकपट हुँदैन भनौं भने छलकपट गर्नेको लामै लाइन देखेको छु। मलाई लाग्छ प्रेम ‘सत्य’ हो। मानिसरूपी जीवनको मीठो भोगाइ हो प्रेम। साहित्यमा भेटिने रस हो प्रेम। तर, पनि प्रेम विभिन्न चरण र बाध्यमा परेका हुन्छन्।
आमाले छोरालई गर्ने प्रेम, बुवा-छोरीको प्रेम, दाजुभाई, दिदीबहिनीको प्रेम, साथीसंगीको प्रेम र मानिस र जनावरको प्रेम। जतिपनि प्रेमलाई हामिले नियाल्ने कोशिस गरेमा हरेक कुरामा माया तथा आत्मियता भेट्छौं। त्यसैले प्रेम एक महान ‘सत्य’ हो।
तर, आजकाल जुन हिसाबले प्रेममा विकृति बढेको छ, जसले म फेरि सोच्न बाध्य हुन्छु आखिर के हो त यो प्रेम भन्ने चिज ? कसैलाई मीठा कुरा भन्दैमा, गुलाफको फूल दिँदैमा हुने हो त प्रेम? आजकलको प्रेम होटल रिसोर्टको रुम भित्र भेटिन्छ, पार्क, गजल बार, डिस्को र रात्रि क्लबमा भेटिन्छ, शपिंग सेन्टर भित्र, मुभी थिएटरमा भेटिन्छ तर यथार्थमा यो प्रेम नभई आकर्षण मात्र हो l जवानीको रसपानको लागि मात्र आजकलका मानिसहरु एकान्त स्थान खोजिरहेका हुन्छन l एकले अर्कालाई क्षणिक खुसि प्राप्त गर्न मात्र खोजिरहेको हुन्छन l केटाले केटीलाई र केटीले केटालाई गर्ने प्रेम निश्चल हुनु पर्छ, भावनात्मक हुनु पर्छ एक अर्कालाई बुज्ने हुनु पर्छ, एकले अर्कालाई समय दिनुपर्छ l
एकतर्फी प्रेमले गर्दा मानिसलाई वेचैन बढाउँछ, छट्पटि बढाउँछ, प्रेमीलाई डिप्रेसनमा लैजान्छ भने अन्ततः धेरै प्रेमीहरुले आत्माहत्या समेत गरेका उदाहरणहरु प्रसस्त छन् तसर्थ कसैलाई झुटो आस्वासन दिएर स्वार्थ पुरा गर्न र शारीरिक आकर्षणको लागि मात्र प्रेम गर्नु भन्दा सुरुमा नै दुवै प्रेमी प्रेमिकाले हरकुरा स्पष्ट बनाउँदा कसैको जीवन बर्बाद हुनबाट जोगिन्छ । जीवन सुखमय पनि हुन्छ l
शारीरिक मिलन मात्र प्रेम होइन भने धन सम्पति संग र आफ्नो स्वार्थ संग सटिने प्रेमले गर्दा समाजमा माया प्रेम सम्बन्धि नकारात्मक सोच पैदा हुदै गएको छ l विस्वासको धरातल माथि उभिएर गरिने प्रेम माथि घृणा पैदा हुँदै गएको छ l तसर्थ माया प्रेमलाई ब्यापार नबनाउँ । अरुको भावना संग खेल्न बन्द गरौं l
समयको विभिन्न कालखण्डमा हामीले सुनेका भोगेका तथा देखेका प्रेम कहानीहरु समेत साक्षि छन् l सत्ययुगका भगवानहरुका प्रेम कहानी, रासलिला देखि अहिले कलियुगको रोमियो जुलियट, मुना मदन देखि अहिले गाउ देखि शहरको गल्लि गल्लि सम्म देखिने माया प्रेमले प्रेमको परिभाषालाई समेत फरक बनाएको छ भने अहिलेको समाजलाई चुनौती समेत दिएको छ l त्यसैले प्रेम निस्वार्थ गरौ, प्रेम बुजेर गरौ, एकतर्फी प्रेममा पागल भएर जिबन बर्बाद नगरौ, कसैको सुन्दर जिबन संग खेलबाड नगरौ, प्रेम सम्झौतामा नगरौ l यौवनलाइ पैसा, मदिरा, शपिंग र ड्रग्समा नसाटौं l